USA: Ruushka faraha ha kala baxo Ukraine - BBC Somali
USA: Ruushka faraha ha kala baxo Ukraine
Image caption John Kerry, xoghayaha arrimaha dibada ee Mareykanka
Xoghayaha arrimaha dibada ee Maraykanka, John Kerry, ayaa ku tilmaamay dhibaatada ka taagan Ukraine mid digniin u ah gaashaanbuurta NATO.
Mr Kerry ayaa intaa ku daray in Ruushka oo doonayo in uu si qasab ah ku badalo soohdimaha dalalka madaxa bannaan, isaga oo ka dalbaday Ruush-ka "in uu nabad siiyo Ukraine," waxaana uu ku hanjabay in gaashaanbuurta NATO ay difaaci doonto goob kasta oo dhulkeeda ka tirsan.
Hadalkan ayuu Mr Kerry ka sheegay kulan looga hadlayay xiriirka ka dhexeeya Yurub iyo Maraykanka.
Falalka ay Ruush-ka ka wadaan gudaha waddanka Ukraine, ayaa muujinayo iskudayga madaxweyne Vladimir Putin ee ah in uu wax ka badelo qaab dhismeedka ammaanka bariga iyo bartamaha Yurub, sida uu sheegay Kerry.
Mr Putin ayaa sidoo kale ku eedeeyay in NATO ay ku soo dhawaanayso xuduudaha waddanka Ruush-ka, tan iyo markii uu burburay Midowga Soviet.
Dhawaantan gaashaanbuurta ayaa qaadday tallaabooyin ay ku xoojinayso joogitaankeeda wadammada dariska la ah Ruush-ka.
Mr Kerry ayaa sheegay in xubnaha NATO looga boohan yahay howl dheeraad ah, ayna tahay in ay ka wada shaqeeyaan ku tiirsanaanta Yurub ee ay ku tiirsan tahay tamarta kaga timaado Ruush-ka, isla markaana aysan dhimin miisaaniyadooda ku aadan difaaca.
Ukraine: Mareykanka oo u hanjabay Ruush
25 Abriil 2014
Lahayste laga sii daayay Bariga Ukraine
Ukraine: Qalalaasaha oo gaaray koofurta